Conte oo lagu wado inuu si dhaqsi leh ugu soo laabto Garoomada si uu Xilka uga badelo…. – Gool FM
Conte oo lagu wado inuu si dhaqsi leh ugu soo laabto Garoomada si uu Xilka uga badelo….
(Europe) 23 Agoosto 2018. Tababarihii dhawaan laga ceyriyay kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa lagu wadaa inuu si dhaqsi leh ugu soo laabto shaqada tababarka isagoo xilka AC Milan ka badeli kara Gennaro Gattuso.
Radio Kiss Kiss ee dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in tababarihii hore ee Juventus iyo Chelsea lagu wado inuu ku soo laabto saaxada kubbada cagta usbuucyo uun kaddib markii laga soo eryay Stamford Bridge.
Macallinka reer Talyaani ee Blues kula soo guuleystay Premier League iyo FA Cup isla markaana Juventus la qaaday saddex jeer oo xiriir ah horyaalka Serie A ayaa lagu wadaa inuu markale ku soo laabto Talyaaniga.
Maamulka Milan ayaa la sheegayaa inaysan kalsooni buuxda ku qabin Gattuso iyadoo ay jirto in afar bilood uun ka hor ay u gacan galiyeen heshiis cusub oo ku sii joogayo San Siro ilaa 2021.
Laacibkii hore ee qadka dhexe Milan ayaa booska ka dhexlay saaxiibkii hore ee Vincenzo Montella kaa oo kooxda laga ceyriyay.
“Waa inaan guul gaarnaa kulanka West Ham, waxaana heystaa qorshaha aan sidaas ku sameyn karno”… Unai Emery
Kabtanka Arsenal Koscielny oo dib u soo laabtay kaddib Qalliinkii lagu sameeyay